खप्तडमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो, कसरी पुग्ने खप्तड ? | Sajhakhabar खप्तडमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो, कसरी पुग्ने खप्तड ? | Sajhakhabar
डोटी, फागुन १० : कोरोना भाइरसको जोखिम घट्दै गएसँगै सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । आन्तरिक तथा छिमेकी मुलुक भारतबाटसमेत पर्यटक आउन थालेपछि पछिल्लो समय खप्तडमा चहलपहल पनि बढ्दै गएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । सुन्दर खप्तड क्षेत्रको अवलोकन गर्न हिजोआज दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक यहाँ आउने गरेका खप्तड पर्यटन विकास समिति डोटीले जनाएको छ ।
अन्य जिल्लाबाट जान फुर्सदमा हिँड्ने पर्यटकलाई सहज हुन्छ भने छोटो समयमा खप्तड भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई भने बझाङबाट नै सजिलो पर्छ । अन्य जिल्लामा एक–दुई दिन हिँडेर खप्तड पुगिन्छ भने बझाङबाट खप्तड जाँदा त्यो अरु जिल्लाको बाटोकै समय बराबर खप्तडमा केही महत्वपूर्ण ठाउँ घुम्न सकिन्छ । काठमाडौँबाट खप्तड पुग्न, घुम्न र फर्कन धेरै खर्च लाग्दैन । काठमाडौँबाट जहाजमा जाने हो भने रु चार हजारदेखि १२ हजारसम्मको टिकट लाग्छ धनगढी पुग्न । बसमा जाने हो भने रु एक हजार ५०० कैलालीको अत्तरिया बजारसम्म गाडी भाडा लाग्छ ।
सगरमाथा आरोहणको लागि बहराइन राजपरिवारका सदस्य नेपाल आउने